साहस ऊर्जाको एक अर्ब पाँच करोडको आइपीओ आउँदै, कति दिने आवेदन ? | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
नेपालमा एकाबिहानै २ पटक गयो भूकम्प, सात वटा घर भत्किए, तीनजना घाइते
बडिगाडमा विवाह भोजमा सहभागि एकै परिवारका तीनजनाको मृत्यु
बागलुङबाट बिरामी लिएर गएको एम्बुलेन्स पाल्पामा दुर्घटना, तीन घाइते !
सिईडिबिको आईपीओ बाँडफाँड आज कति बजे हुँदैछ ? तपाईको भागमा १० कित्ता पर्ला ?
फेरी केपी ओली नै प्रधानमन्त्री नियुक्त, शपथ शुक्रबार
साहस ऊर्जाको एक अर्ब पाँच करोडको आइपीओ आउँदै, कति दिने आवेदन ?
May 13, 2021 May 13, 2021 Nepal E News
बैशाख ३०, काठमाडौं । साहस ऊर्जा कम्पनीले एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको एक करोड पाँच लाख कित्ता आइपीओ निकाल्ने भएको हो । गत चैतमा कम्पनीले आइपओ निष्काशनको अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । आइपीओ निष्काशन अनुमतिका लागि प्रक्रियामा रहेको कम्पनीले बोर्डबाट अनुमति पाउना साथ आइपीओ निष्कासन गर्ने जनाएको छ । उक्त कम्पनीले संङखुवासभामा ८६ मेगावाट क्षमताको सोलुखोला दूधकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
उक्त आयोजनाको निर्माण लागत करिब ११ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस अनुसार आयोजनाको लागत प्रति मेगावाट साढे १३ करोड रुपैयाँ हाराहारी मात्रै रहेको छ । वार्षिक ५२० गिगावाट आवर विद्युत ऊर्जा उत्पादन गर्ने आयोजनाले सुख्खायाममा १०० गिगावाट र वर्षायाममा ४२० गिगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन गर्ने छ । जसबाट आयोजनाले वर्षायाममा एक अर्ब ९२ करोड र सुख्खा याममा ८४ करोड गरि वार्षिक दुई अर्ब ८६ करोड रुपैयाँको विद्युत बिक्रि गर्ने छ ।
प्रति मेगावाट लागत पनि कम र ऊर्जा उत्पादन पनि आकर्षक रहेको आयोजनाको क्रेडिट रेटिङ पनि सकारात्मक रहेको छ । आयोजनाले इक्रा एनपी बीबीं रेटिङ पाएको छ ।
हाँस्नु कि रुनु ? गोबर दलेर कोरोना भगाउने कोसिस !
नेपाल पठाउन खाडीमा रहेका नेपालीले खरिद गरे ६ सय अक्सिजन सिलिण्डर
May 14, 2021 Nepal E News 0
बैशाख ३१, काठमाण्डौ । सिईडिविब हाइड्रोपावरले निश्कासन गरेको आईपीओ बाँडफाँडको मिति तए भएको छ । बिक्री...
May 11, 2021 Nepal E News 0
सिईडिबि हाइड्रोपावरको आईपिओ रिजल्ट कहिले ? यस्ताे छ ढिला हुनुको कारण
बैशाख २८, काठमाण्डौ । सिईडिबि हाइड्रोपावर कम्पनीले निष्काशन गरेको आईपीओमा ११ गुणा बढी आवेदन परेको छ...
May 9, 2021 Nepal E News 0
एन आई सी एशिय बैंकले बीमा सुविधा अन्तर्गतको २० लाख रकम दुईजना सदस्यालाई वितरण
बैशाख २६, काठमाण्डौ । एन आई सी एशिया बैंकले बचतसँगै बीमा सुविधाले भरिपूर्ण चमत्कारिक बचत सिरिज...
भर्खरै बजारमा अाएकाे नयाँ माेबाइलकाे मूल्य
May 19, 2021 Nepal E News 0
कठमाडौं । काठमाडौंमा बुधबार विहान भूकम्पको दोस्रो धक्का महसुस गरिएको छ । िवहान ८ बजेर २६ मिनेट जाँदा लमजुङ्ग नै केन्द्र विन्दु भएर दाेस्राे भूकम्प गएका राष्ट्रय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएकाे छ । आज विहान ५ बजेर ४२ मिनेट जाँदा लम्जुङ केन्द्र विन्दू भएर भूकम्प गएको थियो ।...
बागलुङ । कोरोनाले यहाँका एकैघरका तीन जनाको मृत्यु भएको छ । विवाह भोजपछि बिरामी परेका बडिगाड...
बुर्तिबाङ : बागलुङको बुर्तिबाङदेखि बुटवल जाँदै गरेको एम्बुलेन्स पाल्पाको दोभानमा दुर्घटना हुँदा तीन जना घाइते भएका...
ढोरपाटन ट्याक्सी दु’र्घ’टना हुँदा दुई जनाको गयाे ज्या’न, एक जना घाइते